TOLOTRA – GARANTIE SUR CREDITS IMMOBILIERS (GSI) - Solidis
TOLOTRA – GARANTIE SUR CREDITS IMMOBILIERS (GSI)
Hiaraka isika hanamora ny fahazoanao manana trano na tany.
Ny tanjon’ny SOLIDIS dia hitondra fanatsarana eo amin’ny kalitaom-piainan’ny tokatrano malagasy tsirairay, indrindra ireo manana farim-piainana salantsalany, amin’ny alalan’ny fanohanana azy amin’ny fanatanterahana ny tetik’asany amin’ny resaka trano sy tany. Miaraka amin’ny antoka SOLIDIS, izay tsotra sy tsy misy sarany fanampiny, tsy ho nofinofy intsony ny fahazoana tany, fanorenana na fanatsarana trano fonenany.
Inona avy ireo tombontsoa ho azonao?
TSOTRA: Ny mpiandraikitra ny kaotinao ihany no mandray sy mandinika ny fangatahanao. Ambonin’izany, ny fanaovana antoka ny fanananao dia tsy an-tery fa am-pahalalahana tanteraka.
MANDANJALANJA: Mora kokoa ny dingana arahanao ary ny tsy miovaova ny tahan’ny sarany alain’ny SOLIDIS mandritra ny fotoana hindramanao vola. Tsy misy sarany fanampiny angatahana aminao raha sendra misy ny famotsorana ny antoka.
HAINGANA: Haingana ny fahazoana ny antoka nohon’ny fahatsoran’ireo dingana lalovana amin’ny fangatahana ary mandritra ny fotoana fohy dia ho tafavoaka ny vola tianao hindramina
MILAMINA: Ankoatran’ny fandinihana ny fangatahanao, SOLIDIS dia vonona hatrany hijoro ho mpiantoka ara-bola azo antoka ho anao.
OLONTSOTRA manana kaonty any amin’ny banky ary manana fidiram-bola mirotsaka tsy tapaka anaty kaonty manantompo
Manasa anao izahay mba hiantso mivantana ny bankinao, izay afaka manome toro-hevitra anao momba ny tolotra tohanan’ny SOLIDIS.
Inona no mampiavaka ny tolotra ?
Ireo karazana tetikasa: Hividy trano na tany , hanangana na hanavao trano.
Tahan’ny antoka : 100% ny vola indramina
Tetibola iantohana : hatramin’ny 500 tapitrisa ariary.
Sandan’ny fiantohana : 4% HTVA ny vola indramina*
Faharetan’ny famerenam-bola : hatramin’ny 12 taona (arakaraky ny faharetan’ny findramam-bola)
Faharetan’ny fikirakirana ny taratasy fangatahana: 3 ka hatramin’ny 5 andro
Inona avy ireo antotan-taratasy ilaina?
Kara-tany na Certificat de situation juridique.
Tolo-bidy mazava momba ny fananganan-trano na fifanarahana ara-barotra.
Fanamarinana ny fidiram-bola, fifanekena arak’asa.
Simuler votre prêt(MG)
Mba hampandrosoana ny tetik’asanao, ataovy eto maimampoana ny fanombanana ny tetikasanao ary tsy misy arakaraka!
IREO MPIRAY OMBON’ANTOKA AMINAY